Dabley hubaysan oo toogtay Wasiirka Gaadiidka Uganda | Berberanews.com
Home WARARKA Dabley hubaysan oo toogtay Wasiirka Gaadiidka Uganda
Dabley hubaysan oo toogtay Wasiirka Gaadiidka Uganda
Uganda-(Berberanews)-Rag hubaysan ayaa weerraray oo dhaawacay taliyihii hore ee ciidammada dhulka ee waddanka Uganda, Janaraal Katumba Wamala, iyadoo halkaas lagu dilay gabar uu dhalay janaraalka iyo darawalkiisa.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in rag hubaysan oo watay mootooyin ay dhowr xabadood la dhaceen gaadhiga uu janaraalka saarnaa.
Wax u muuqanaya iskuday la doonayay in lagu khaarajiyo taliyihii hore ee ciidammda dhulka iyo taliyihii hore ee booliska oo haatan ah wasiir ka tirsan dowladda ayaa waxa ay Uganda ka kicisay walaac badan.
Sanadihii u dambeeyey, dalka Uganda waxaa gilgilay dhacdooyinka ceykan oo kala ah, kuwaasoo dadka geysanaya ay isticmaalaan mooto iyagoo hubeysan.
Bishii June ee sanadkii 2018-kii, Ibrahim Abiriga, oo ahaa siyaasi aad u taageera Madaxweyne Yoweri Museveni, ayaa lagu toogtey goob u dhaw gurigiisa, dabadeedna wuxuu u geeriyooday markii danbe dhaawac soo gaadhey.
Afhayeenkii hore ee booliiska Andrew Felix Kaweesi, ayaa la khaarajiyey bishii April ee sanadkii 2017-kii.
Qareen, iyo wadaado Muslim ah oo dhawr ah, ayaa sidan oo kale lagu diley.
Ma jirto dhammaan dilalkan qorsheysan cid loo soo xirey, oo inta badan baaritaan lagu sameeyey ay maxkamadi xukuntey.
Previous articleDjibouti oo u gacan gelisay Itoobiya saraakiil TPLF ah
Next articleKomishanka oo ka hadlay caqabado dub u dhigay natiijada hordhaca ah ee Doorashada